Ukususela ekupheleni kwekhulu lama-20, amagama amaninzi angaphandle avela kwiilwimi zesiRashiya, kwaye, ngelanga, akukho nto iguqulelwe ngawo onke amagama. Apha, umzekelo, igama elithi "snack" linentsingiselo yalo. Ukunyuselwa kukutya ongasidla ngokukhawuleza phakathi kokutya, njengoko bathi "bhenqisa imbungu". Phakathi kokutya okutyiwayo kukho iimveliso ezifana ne-popcorn, i-chips, i-fishfish eyomileyo (i-squid kunye neentlobo zeentlanzi), i-ice cream, i-crackers, imbewu, ii-pie, i-nut kunye neentlobo zeetroleta. Nangona kunjalo, ku funeka kuqatshelwe ukuba intlanzi ewusizo kakhulu yi-popcorn. Ukunika intendelezo yobuninzi kulo mhlobiso, ndingathanda ukukuxelela izinto ezinobuncedo ze-popcorn.
I-Popcorn ngumkhiqizo we-cereal opheleleyo oqukethe i-carbohydrate ephezulu-umthombo wamandla omzimba. Ngexesha elifanayo, umxholo wekhalori wale mveliso yi-33 kilocalories ngosuku (22g-28g.) Ngaphandle kweoli, phambi kohlaza okanye i-bhotela, umxholo wekhalori uphuma kuma-calorie ayi-133, ngoko unokusetyenziswa kwiinkqubo zokulahlekelwa kwesisindo. Ngendlela, i-popcorn igcwele kakhulu kwaye ngexesha elifanayo aliphazamisi isondlo, njengoko ikhutshwa ngokukhawuleza isisu. Kodwa inzuzo yayo eyona nto iphezulu kwi-fiber content.
Yintoni i-fiber kwaye yintoni na?
I-Fiber yifayili yokutya, xa ingenwa kwindlela yokugaya kunye ne-exposed to enzymes, ayigciniwe ngokupheleleyo, ngokungafaniyo nokutya konke. Kungekude kudlulileyo, i-cellulose yayithathwa njenge-"ballast", kwaye nayiphi indima edlala kuyo kwinkqubo yokugaya ingacacanga ngokupheleleyo.
Kwaye kuphela ekupheleni kwekhulu lama-20, ngenxa yemigudu yenzululwazi kwihlabathi lonke, ukubaluleka kwezinto ezinobulunga emzimbeni ukuchithwa okufanelekileyo kunye nempilo yabantu kubonakala. Ukungabikho kwefayibha yokutya kubangela izifo ezinobungozi ezifana neswekile, isifo se-atherosclerosis, ingozi yomshukela ophezulu, ukunyuka kwesifo kunye nomdlavuza wamathumbu kunye nomzimba.
Ukungena kwindlela yokutya, i-fiber iguqulwa ibe yindoda enobukhulu obunzima obuncitshiswayo, okunciphisa ukudibanisa kwama-carcinogens kunye ne-intestinal mucosa, igxininisa ukukhula kweebhaktheriya zepathogen ezenza i-carcinogens, ukukhusela iiseli zamathumbu ezisuka kwintsholongwane embi. Ukukhula kwezixhobo ezahlukeneyo zamathumbu emathunjini amathumbu kubangela ama-amine-ezi zinto ziyingozi apho i-fiber iyakwazi ukubopha kunye nokususa emzimbeni.
I-synthesis yamavithamini njengePP, K kunye neQela B, ezibaluleke kakhulu ekusebenzeni kakuhle kwe-metabolism, iyafumaneka ngenxa yokucwangciswa kwefiber nge-microflora yamathumbu. Kukhona i-fiber, kwaye ngoko i-popcorn, iipropati zokususa i-sodium kunye namanzi emzimbeni, kuba zinempahla ye-diuretic.
I-fiber fiber yefayibha idlala indima ebalulekileyo ekukhuseleni isifo sikashukela, ngoko ukufunyanwa kwefayibha imihla ngemihla kubonisa ukukhululwa kwe-insulin, ngenxa yokukwazi ukunciphisa ushukela wegazi. Indima ebalulekileyo idlalwe yi-fiber yokutya ekukhuseleni ukuvela kwezifo ze-cardiovascular, ekupheliseni i-triglycerides engaphezulu kwegazi, ezichaphazeleka ngokuthe ngqo ekubunjweni kwe-cholesterol "embi". Ukongezelela, ubukho bomlinganiselo othile wefayibhile ekudleni okudliwayo kuphucula ukusebenza kwe-microflora yamathumbu.
Ukugqithisa ukuhamba nge-digestive tract, i-cellulose ihlambulula inani leebhiliyoni ze-intestinal ezincelisayo kunye nokugaya izondlo kwi-mucus, i-poisons, i-carcinogens, i-mutagens, i-slags, i-salt metal, i-pesticides, i-nitrites engena emzimbeni ngeziqhamo nemifuno. Kwakhona kunceda ukwandisa izinga leswekile kwigazi.
Ngaloo nto isishwankathela yonke into ekhankanywe ngasentla, izazinzulu zivumile ukuba ukutya kwe-fiber kwansuku zonke, kuncitshiswe ingozi yezifo zeentlobo ezithile zesifo somhlaza wesisu kunye ne-rectum, kwaye isebenza njengokuthintela ukuphazamiseka kwemizimba, iziqhumane, izilonda, ukuqhaqhaqhafaza, i-diverticulosis . Kule nkalo, iingcali ze-US ezikwimimandla ye-oncology zincoma kakhulu ukuba uchithe i-20-35 gram yefiber nsuku zonke.
Ngokwezibalo zokuqala, enye inxalenye ye-popcorn iqulethe i-50% ye-fiber imihla ngemihla. Ngoko, akumangalisi ukuba oogqirha baseMerika bacebisa kakhulu ukubandakanya ukutya kwabo kwimihla ngemihla, abantu abadala kunye nabantwana, bathengisa le mveliso kwiincwadana kunye neencwadana zemibutho eyahlukeneyo yezokwelapha eMelika.
Xa uthetha ngeendawo ezixhamlayo ze-corn popcorn, kuyafaneleka ukuhlawula ngokufutshane indlela eya kwenziwa kuyo. Inzuzo ekuthengiseni i-popcorn ikhulu kakhulu kunenzuzo ekuthengiseni amathikithi ukuya kuma-cinemas, ekhuthaza abanikazi beemidlalo, ukuba banike iindwendwe ezinqwenelekayo, ezityuwa, ishizi, i-cheese, i-cheese, i-cheese, i-caramelized corn, kunye nesityebi esinezixhobo ezinobungozi, ngenxa yokuba imveliso ye-kilocalories iyanda ngayo, ngamanye amaxesha iindawo ezithile zeemveliso ziqulethe 1000 kilocalories kunye nokunye. Emva kokudla i-popcorn enjalo, unxankulu luqala ukunyuka kwaye ukhetho olukhethiweyo lweziphuzo eziphathekayo zifumaneka ngokukhawuleza. Ngaloo ndlela, imveliso enomsebenzi iba yingozi. Ukongezelela kubo bonke oogqirha baseMerika, uxhumano lufunyenwe phakathi kwezifo zamaphaphu kunye nokusebenza kwishishini lokutya kwimveliso ye-popcorn. Le ngozi yokuyingozi ihambelana nenyaniso yokuba ioli kunye nomxholo ophezulu we-diacetyl ukunambitheka, okuyimveliso yamachiza kwaye yenziwe yingozi kakhulu ngamaqondo aphezulu okuphefumula.
Yintoni oyifunayo ukwazi ngemifuno yasendle?
Isondlo somama onesiko: ukuphepha i-intestinal colic kwintsana
Impembelelo kwimpilo yabashenxisi abathintelayo
Sibelana ngeemfihlelo ukutsala imali kunye nenhlanhla ebomini bakho
Ukunciphisa umzimba ngesondo
I-snowman: indlela yokwenza i-snowman ephepheni ngezandla zakho
Sisiphi isipho sokubonisa uPapa?
Shibari njengendlela yokwenza ulwahlulo lobomi bezesondo
Impembelelo yeempumelelo kwimisebenzi yobudlelwane
Yintoni endiyifunayo ukuba ndiyazi xa ndikhetha ityuwa edibeneyo?